किन बाउँडिन्छ शरीर ?
धेरै मानिसमा हातखुट्टा बाउँडिने समस्या आइरहेको हुन्छ । कसैको बसिरहेको वेला त कसैको राति सुतेको वेला हातखुट्टा बाउँडिन्छ । हातखुट्टा बाउँडिने समस्या धेरैजसोमा रहेको पाइन्छ । विशेषगरी, घरमा काम गर्ने महिला, खेलाडी, अफिसमा काम गर्नेहरूमा हातखुट्टा बाउँडिने समस्या आउने गर्छ । यसबारे केही जानकारी :
शरीरमा इलेक्ट्रोलाइज भन्ने एउटा तत्व हुन्छ । त्यो तत्वको ब्यालेन्स नमिल्दा हातखुट्टा बाउँडिने समस्या देखापर्छ । सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, मिनरल, भिटामिन डीजस्ता तत्वको कमी भयो भने शरीरमा इलेक्ट्रोलाइजको ब्यालेन्स मिल्दैन ।
हातखुट्टा बाउँडिने समस्या हुनेमा सबैभन्दा प्रमुख कारण शरीरमा भिटामिन डीको कमी हुनु हो । भिटामिन डी हाम्रो शरीरमा आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व हो । जसका कारण अन्य रोग पनि लाग्न सक्छ ।
घाममा बसेर हामीले भिटामिन डी प्राप्त गर्न सक्छौँ । खानामा पनि भिटामिन डीयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । जसले गर्दा हातखुट्टा बाउँडिने समस्याबाट मुक्त भइन्छ ।
हातखुट्टा बाउँडिने एउटा सिमटम्स मात्र हो । के कारणले हातखुट्टा बाउँडिन्छ भन्ने कुरा रगत र हर्मोनको टेस्ट गरेपछि मात्र थाहा पाउन सकिन्छ । शरीरमा हुने हर्मोनको कमीले पनि हातखुट्टा बाउँडिने हुन्छ ।
अफिसभित्र काम गर्ने, घरमा काम गर्ने महिला, खेलाडीको खेल्ने प्रक्रिया नमिल्दा हातखुट्टा बाउँडिने हुन्छ । हार्ड लेभल काम गर्ने, धेरै पसिना आउनेहरूमा हातखुट्टा बाउँडिने हुन्छ । पसिनाका माध्यमबाट पानी धेरै जाने हुँदा हातखुट्टा बाउँडिने हुन्छ ।
बसाइको प्रक्रिया नमिले पनि हातखुट्टा बाउँडिने समस्या देखा पर्न सक्छ । बसाइ नमिल्दा शरीरको कुनै एक भागमा मात्र दबाब पर्न गयो भने मासु बाउँडिने गर्छ । शरीरमा रक्तसञ्चार राम्ररी नभए पनि मांसपेशी बाउँडिने समस्या निम्तिन्छ । त्यसैले हामीले पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ । लामो बाटो हिँड्दा जीवनजल पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ ।
अन्डाको सेतो भागका फाइदा के के छन् त ?
बिहे गर्नुभयो ? कुन उमेरमा बन्ने बुबाआमा ?
स्मार्ट कुकिंगको ९ टिप्सः यसरी बनाउनुहोस् स्वादिलो खाना
गर्भनिरोध चक्की पनि फाइदाजनक ?
खाना खाने बित्तिकै नगर्नुहोस् यी ६ चीज, स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ
ओम छाडे लगत्तै हृयाम्स अस्पतालमा जोडिए डा. भोला रिजाल
थाहा पाउनुस् , शंख बजाउनेलाई लाग्दैन यी रोग
सेकुवामा स्वाद भिजेको छ ? मुटुको रोग लाग्छ है
एक वर्षभित्र क्यान्सरको सटिक उपचार ल्याउने इजरायलका वैज्ञानिकहरुको दावी
ल्वाङले स्वास्थ्यमा औषधीको भुमिका खेलेको हुन्छ । ल्वाङको सेवनले धेरै प्रकारका स्वास्थ्यसम्बन्धि समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ । चिसो वा रुघाखोकी लागेमा ल्वाङ पानीमा उमालेर पिउँनाले शरीरलाई नीकै फाइदा पुर्याउँछ । यस्ता छन् ल्वाङका फाइदाहरु मुटुको समस्या दिनमा एउटै मात्र ल्वाङ सेवन गर्नाले पनि कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्न सघाउँछ । यसले मुटुसम्बन्धि समस्याबाट बचाउँन मद्दत गर्छ । एसिडिटी ल्वाङ खाने गर्नाले मुखमा ‘सेलाइवा’ बढी उत्पादन हुन्छ, जसले खानालाई राम्ररी पचाउन सघाउँछ र पेटमा एसिडिटीको समस्या हुँदैन । रोगसँग लड्ने क्षमता यदि खानामा ल्वाङलाई पनि मिसाउनु भएको छ भने शरीरलाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ र तपाई धेरै रोगहरुबाट बच्न सक्नुहुन्छ । अनुहारमा चमक दिनमा दुई पटक ल्वाङ हालेको चिया पिउनाले अनुहारमा चमक बढ्छ । नरम छाला ल्वाङमा पाइने ‘एन्टीओक्सिडेन्ट्सले छालालाई नरम र चमकिलो बनाइराख्न मद्दत गर्छ । आँखाका लागि अधिक मात्रामा पाइने भिटामिन ए ल्वाङले आँखाको ज्योति कायम राख्न मद्दत गर्छ । दाँत दुखाई ल्वाङमा पानइने ‘एन्टी इफ्लेमेटरी’ गुणले दातको दुखाईलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । पिनास यसमा ‘युजेनल’ पाइन्छ । बिहान–बेलुका ल्वाङको चिया पिउनाले पिनासको समस्याबाट राहत पाउँन सकिन्छ ।